ရေငံပိုင် ဦးရှင်ကြီးနတ်ကဲ့သို့ပင် ရေငံဒေသပင်လယ်ပိုင်း၌ ထင်ရှားသော နတ်တစ်ပါးဖြစ်သည်။ လူ့ဘဝက မုဆိုးတံငါအလုပ်ဖြင့် အသက်မွေးသူ ဖြစ်သည်။ ရပ်ရွာ၌ နတ်ကနားပွဲများ ပေးသောအခါ ယင်းအတွက် တစ်ပွဲသတ်သတ် တင်မြှောက်ကြရသဖြင့် လူ့ဘဝကပင် သူ့ကို တစ်ပွဲစားကြီး ဟူ၍ ကျေ ...
ကွမ်းရည်တော်ဆိုသည်မှာ ဘုရင်မင်းမြတ်တို့ အပါးတွင် စေပါးတော်မူ၍ နံနက်မျက်နှာသစ်တော်၊ ညနေဘုရား ပူဇော်တော်မူသောအခါ ရွှေဖလားကလာပ်နှင့် ထည့်သော ဆန်ပန်းပေါက်ပေါက်၊ ၎င်းပြင် မွှေးကြိုင်သော ရရာပန်းတို့ကို နံနက်ည အမြဲမပြတ် ဆက်သ၍ ထွက်တော်မူသောအခါ ကွမ်းအစ်တေ ...
ခမည်းဆိုသော ဝေါဟာရ၏ မူလအဓိပ္ပါယ်မှာ ချစ်ခင်မြတ်နိုးအပ်သူ ဖြစ်သည်။ ပုဂံကျော်စာများနှင့် အင်းဝခေတ်မှ စ၍ ပျို့၊ ကဗျာ၊ လင်္ကာများတွင် ဖခင်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ သားကိုသော် လည်းကောင်း "ခမည်း"ဟူသော ဝေါဟာရဖြင့် သုံးစွဲခဲ့ကြကြောင်းကို တွေ့ရသည်။ ယခုခေတ်တိုင် ...
စုန်း၊ ကဝေ၊ တစ္ဆေတို့ကို ယုံသူများသည် မိမိတို့၏ သား သမီး အိမ်သူအိမ်သား တစ်စုံ တစ်ယောက် မမာမကျန်း ဖြစ် သည့်အခါ၊ သူရဲတစ္ဆေ စသည်တို့ ဖမ်းစားသည်ဟု ယူဆကြ သည်။ ဤသို့ ဖမ်းစားခြင်းကို ကုသရန် ပယောဂဆရာများကို မေးမြန်းလေ့ရှိကြသည်။ ထိုအခါ ပယောဂဆရာတို့က တစ္ဆေ ...
မြိတ်မြို့တွင် တော်သလင်းလပြည့်ကျော် ၄ ရက်နေ့ကို ခေါသရပ်နေ့ ဟု သတ်မှတ်ပြီး၊ တော်သလင်းလဆုတ် ၃ ရက်နေ့ညတွင် ခေါသရပ်မုန့်များ ရောင်းချကြသည်။ တနည်းအားဖြင့် အာရုဏ်ဆွမ်းလောင်းပွဲ ဖြစ်သည်။ မုန့်ကို အချို့အိမ်များက ကိုယ်တိုင်လုပ်၍ အာရုဏ်တက် ဝေလီဝေလင်း သံဃာ ...
မြန်မာမှု နယ်ပယ်၊ စကားပြောသည့်အရာတွင် ကျွမ်းကျင်လိမ္မာစေရန် နည်း အမျိုးမျိုးတို့ကို စကားကြီးဆယ်မျိုးဟူ၍ မြန်မာစာ၌ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။ ထိုဆယ်မျိုးမှာ - ရေကူးညာတင်၊ ကောက်ပင်ရိတ်လှီး၊ ရေစီးဖောင်ဆန်၊ အိုးတန်ဆန်ခပ်၊ ဆီပွတ်ကျည်ပွေ့၊ ဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင်၊ ...
စကားထာသည် စကားဓာရ မှ စကားဓာစကားထာ ဖြစ်လာသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဓာရသည် ဆောင်သည်ဟူသော အနက်ရှိသဖြင့် ဆောင်ထားအပ်သော စကားဟူ၍ ဖြစ်နိုင်သည်။ တဖန် ပါဠိဘာသာ ဌာပန သက္ကတဘာသာ သ္ထာပန မြန်မာဘာသာ ထားခြင်း အနက်ကို ဆောင်ပေသည်။ မုန့်ကို ဌာပနာ သကဲ့သို့ စကားကိုလည်း ဌာပနာသ ...
စကားလိမ်-ဆိုသည် ရှေ့အသံနဲ့ နောက်အသံ ပြောင်းပြီး ပြောင်းပြန်ပြောသည့် စကားအပြောမျိုးကို ဆိုလိုသည်။ နောင်မှသိ အား နိမှသောင် ဟု ပြောကြသည်မှာ စကားလိမ်ဖြစ်သည်။ စကားလိမ်ဆိုသည်မှာ စကား၏ အနှစ်သာရ အဓိပ္ပါယ်ကို လိမ်ညာပြောသော စကားမျိုးကို ဆိုလိုရင်းမဟုတ်ပေ။ ...
စစ်ကိုင်းမုန့်ပေါင်းပွဲတော် သည် စစ်ကိုင်းမြို့၊ ထားဝယ်ဈေးရပ်၊ ဝေဠဝန်ငါးထပ်ကြီးဘုရားရှေ့ လမ်းမတန်းတွင် နှစ်စဉ် နတ်တော်လပြည့်နေ့ည၌ မုန့်ပေါင်းပွဲဈေးတန်းခင်းကျင်း ရောင်းချသည်။ စစ်ကိုင်းမြို့ အခေါ် မုန့်ပေါင်းပွဲတွင် ငါးထပ်ကြီးဘုရားအနီး ရပ်ကွက်များမှ ...
သုပညာနဂရဆိန္နမင်းလက်ထက် သာသနာ သက္ကရာဇ် ခုနှစ်တွင် ဥတ္တရသီရိ မထေရ် စီရင်သည်ဟု ဆိုသော ကပ္ပါလင်္ကာရ ကျမ်း အလိုအရ မြန်မာ အက္ခရာတို့တွင် စာဖိုနှင့် စာမ ဟူ၍ အက္ခရာ နှစ်မျိုး ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ဂဠုန် ငှက်ဟု အမှတ်သညာပြုကြသော နေမင်းက ညွှန်းဆိုသည့် အက္ခရာများ ...
စိုက်ခင်းများတွင် ပျိုးကြဲပြီးစကာလတွင် ငှက်များသည် စပါး၊ပဲ စသောမျိုးစေ့များကို လာရောက်စားတတ်ကြ၏။ တောင်သူလယ်သမားများသည် မျိုးစေ့များကို စားသောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် စာခြောက်ရုပ် ပြုလုပ်ကာ ငှက်များကို ခြောက်လှန့်ကြသည်။ ငှက်အမျိုးမျိုးလာရောက်စားကြသော်လ ...
ဆည်တော်သခင်မနတ်ပွဲ သည် ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ ဆည်တော်လေးကျေးရွာတွင် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဝါခေါင်လဆန်း ရက်မှ ရက်အထိ ကျင်းပသည်။ ထိုနတ်ပွဲသည် မန္တလေးခရိုင်အတွင်း အစောဆုံးကျင်းပသော နတ်ပွဲဖြစ်ပြီး ဆည်တော်လေးဆည် ဘေးတွင်ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ ဆည်တော်လေးဆည်ရေ သောက်သ ...
ဇာတ်၊ အငြိမ့်၊ ရုပ်သေး၊ ယိမ်းစသည်တို့အပြင်၊ မျက် လှည့်ပြခြင်း၊ လက်ဝှေ့ထိုးခြင်း စသည်တို့ကို ပြသခြင်းကိုခြုံ၍ ပွဲဟုခေါ်သည်။ ထိုပွဲသဘင်များကျင်းပရာနေရာကို ယေဘုယျ အားဖြင့် ပွဲရုံ၊ ဇာတ်ရုံဟု ခေါ်လေသည်။ ဇာတ်ရုံတို့၏ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာပုံအစဉ်ကို ပြဆိုလ ...
ဇော်ဂျီ ဆိုသည်မှာ ပါဠိ သက္ကတနွယ်- ဟိန္ဒီစကားလုံး ဇောဂီ မှ ဆင်းသက်လာပုံရသည်။ ` စက္ခု သင်္ဃာ အရိယာနှင့် ဆရာပုဏ္ဏား ဇော်ဂီအားလည်း´ ဟူ၍ ဓမ္မပါလပျို့တွင် တွေ့ရှိရလေသည်။ `ပုဏ္ဏားဇော်ဂီ တပသီနှိုက်´ဟူ၍၎င်း၊ ရွှေဟင်္သာမင်းပျို့တွင် `ရပ်ရှစ်ပါးမှ ပုဏ္ဏားဇေ ...
တ‌စ္ဆေ ဟူသည် အထူးထူးအပြားပြားကို ဖန်ဆင်းနိုင်‌သော နာနာဘာဝတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ တစ်ဘဝမှ တစ်ဘဝသို့ ကူးပြောင်းမှုတွင် ယုံကြည်‌သောသူတို့သည် တ‌စ္ဆေရှိသည်ကို မုချယုံ ကြည်ကြ၏။ တမလွန်ဘဝကို ယုံကြည်သူအချို့ကလည်း တ‌စ္ဆေကို မျက်မြင်ကိုယ်‌တွေ့ မဟုတ်သဖြင့် ယုံကြည် ...
တဘောင် ဟူသည် သူငယ်၊ သဘင်သည်နှင့် သူရူးတို့ ပြောဆိုကြသော နိမိတ်စကားဟူ၍ မြန်မာအဘိဓာန် အကျဉ်းချုပ်တွင် ဖွင့်ဆိုသည်။ ဆရာကြီး ဦးဘရင်က တဘောင်ဟူသော စကားမှာ တံဘာသ မှ ပြောင်းလာခြင်း ဖြစ်သည်။ `တံ´ သည် ထို ဟူသော ညွှန်ကြားခြင်း နိဒဿန ဖြစ်သည်။ `ဘာသ´မှာ ပြောဆိ ...
ဒုယင် သို့မဟုတ် တုယင် သည် အထက်တန်းကျသည့် မြန်မာတို့၏ ရှေးခေတ်အင်္ကျီတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ မင်းနှင့်စပ်ဆိုင်သည့် နေရာများတွင် သုံးစွဲလေ့ ရှိသည်။" အထက်တန်းကျလျှင် ဒုယင်၊ အောက်တန်းကျလျှင် ဖျင်” ဟူသည့် ရှေးဆိုရိုးစကားလည်း ရှိသည်။
တောင်တော်သခင်မသည် တောင်ပြုန်းနယ်၊ အင်ကျယ်ရွာသူကြွယ်တစ်ဦး၏သမီးဖြစ်ပြီး အမည်မှာ မရွှေဥဖြစ်သည်။ နောင်အခါတွင် တောင်ပြုန်းရွာသား သစ်ကုန်သည်မောင်ရင်မောင် နှင့် အကြောင်းသင့်ကာတောင်ပြုန်းရွာတွင် လိုက်နေသည်။ မကြာမီ မောင်ရင်မောင်သည် အထက်မဲဇာအရပ်သို့ သစ်ဖော ...
တောင်ပြုန်းပွဲတော် သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အထင်ရှားဆုံး ပွဲတော်များအနက် တစ်ခုဖြစ်ပြီး တောင်ပြုန်းရွာ၏ တောင်ပြုန်းနတ် မင်းနှစ်ပါးကို နှစ်စဉ် ပူဇော်ပသသောအနေဖြင့် ကျင်းပကြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် တကယ့်ပွဲတော်မှာ အနော်ရထာမင်းတည်ထားခဲ့သော ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားန ...
ရွှေဖျဉ်းကြီးနှင့် ရွှေဖျဉ်းငယ်နတ်တို့သည် ပုဂံ၊ အနော်ရထာမင်းလက်ထက် သထုံမြို့မှ ဗျတ္တနှင့် ပုပ္ပားပန်းစားဘီလူးမတို့၏သားများဖြစ်သည်။ တောင်ပြုံးအရပ်တွင် အနော်ရထာမင်းဘုရားတည်ရာ၌ အုတ်နှစ်ချပ်လစ်လပ်သည်ဆို၍ ဘုရင်ကကွပ်မျက်ရာမှနတ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ရွှေဖျဉ် ...
ရွှေဖျဉ်းကြီးနှင့် ရွှေဖျဉ်းငယ်နတ်တို့သည် ပုဂံအနော်ရထာမင်းလက်ထက် သထုံမြို့မှ ကုလားဗျတ္တနှင့်ပုပ္ပါးပန်းစားဘီလူးမတို့၏သားများဖြစ်သည်။ တောင်ပြုံးအရပ်တွင် အနော်ရထာမင်းဘုရားတည်ရာ၌ အုတ်နှစ်ချပ်လစ်လပ်သည်ဆို၍ ဘုရင်ကကွပ်မျက်ရာမှနတ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ရွှေဖျ ...
ထွက်တော်မူကြီးပုံတော်များမှာ ၁၈၆၅ခု မေလ ၁၆ရက်နေ့တွင် မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးကိုယ်တော်တိုင် မန္တလေးတောင်ခြေကျောက်တော်ကြီးဘုရားသို့ မင်းခမ်းမင်းနားနှင့်ထွက်တော်မူပုံကို ပန်းချီဆရာက ပုရပိုက်တွင် ရေးဆွဲမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပြီး ယင်းပုရပိုက်ကို မစ္စတာဆွင်ဟိ ...
နတ် များသည် ဘားမား တို့အား ခွဲခြားထားသည်။ အားလုံးသော ၃၇ မင်းနတ်များသည် လူသားများဖြစ်ကြပြီး ၊ ကြမ်းတမ်းသော သေဆုံးရခြင်းများ နှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဤသို့သော ဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် နတ်စိမ်းများ ဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။ သို့သော်လည် ...
နားထောင်ခြင်း ဟူသည် ကြားရအောင် အားထုတ်ခြင်းဟုသာ ထင်တတ်ကြသည်။ အခြားသောအဓိပ္ပာယ်မှာ နာခံခြင်း၊ လိုက်နာခြင်း၊ နာယူခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် နားထောင်ခြင်းအလေ့ ဆိုသည်မှာ အထက်ပါ အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးစလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ "ကြားရအောင် အားထုတ်သည်"ဟု ...
နီတိ ဟူသောဝါဟာရသည် သင်္သကရိုက်ပါဠိ ဘာသာစကားဖြစ်၍ လမ်းညွှန် ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပေသည်။ လောက လူသားတို့ သိမှတ်လိုက်နာအပ်သည့် လူမှုကျင့်ဝတ် နှင့် လူမှုစည်းကမ်း များဆိုင်ရာထုတ်ဖော် လမ်းညွှန်ထားချက်များကို ပေါင်းရုံး၍ လောကနီတိ ဟုခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်း ...
နှမတော်နတ် သည် မဟာဂီရိနတ် ဖြစ်သော မောင်တင့်တယ်၏ နှမတော် သေဉ်လည်ကြောင်မင်း၏ မိဖုရား ဖြစ်သည်။ မောင်တင့်တယ်အား သေလဉ်ကြောင်မင်းက မီးရှို့၍ သတ်သော အခါတွင် ငါ့ကြောင့် သေဆုံးရသည်ဟူ၍ မီးပုံအတွင်းသို့ လိုက်လံခုန်ဆင်းသည်။ အစောင့်အကြပ်များက ဝိုင်း၍ ဆွဲသော အ ...
ကိုကြီးကျော်၏ ဘဝဇာတ်ကြောင်းက တော်တော့ကို ေ၀ဝါးထွေပြားပါသည်။ ဘဝဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုက ကိုကြီးကျော်ကို ပုဂံဘုရင်သိန်းခွန်မင်း၏ သားအဖြစ် ဖော်ပြပါသည်။ သိန်းခွန်မင်းဟူသည်မှာ အနော်ရထာမတိုင်မီ ၁၅ ဆက်က မင်းဖြစ်သည့်အတွက် သမိုင်းဆရာအစစ်တွေကတော့ လက်ခံမည်မထင်မိ။ ...
မောင်ရို့ ၊ မယ်ရို့ - လေး-လေး-လေး-လေး ချမ်းရေကြက်တေ ၊ အိမ်မှာနီလို့ ပုဆိုးခြုံဗျာ ၊ ကုပ်ပီးကေ မီးလှုံဗနာ ၊ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လို့ ထိုစကား၊ ဒေစကား ၊ ပြောနီလာ တပို့တွဲလမှာ ၊ ရထားပွဲ ချမ်းစွာတိကို ၊ ဘေးဖယ်ထား ချွေးထွက်သံယို ၊ ရထားဆွဲဖို့ အားလုံးလာလတ ...
ပရိမ္မရှင်မင်းခေါင်နတ်သည် အပြင် ၃၇ မင်း နတ်တွင် ပါဝင်သော နတ်တစ်ပါး ဖြစ်သည်။ သူသည် ပုဂံခေတ် အနော်ရထာမင်း၏ အစ်ကိုဝမ်းကွဲ ကျဉ်စိုးမင်း ဖြစ်ပြီး သမင်လိုက်နေစဉ် မုဆိုးတစ်ယောက် ပစ်လိုက်သော မြှားချက်ကြောင့် မတော်တဆ ကွယ်လွန်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ပရိမ္မရှင်မ ...
ပါးရဲထိုးခြင်း သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားများထဲမှ အထူးခြားဆုံးသော ချင်းတိုင်းရင်းသားများ၏ မိရိုးဖလာ အစဉ်အလာ တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ မျက်နှာတွင်သာ ဆေးမင်ကြောင်ခေါ်၊ ပါးရဲခေါ် ပါးမဲထိုးခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရင်များ၊ မိဘုရား တင်မြ ...
ပုန်းမကြည် သည် တောင်သူလယ်သမားတို့ တင်မြှောက်ပသရသော နတ်ဖြစ်လေသည်။ နတ်ဆိုသော်လည်း အတွင်း ၃၇မင်း၊ အပြင် ၃၇မင်း နတ်ထဲတွင် မပါဝင်ပေ။ တပေါင်းလ အခါသမယတွင် ပုန်းမကြည်ရှင်မကို တင်မြှောက် ပသတတ်ကြသည်။ ဤတွင် ပုန်းမကြည်ဆိုသည်မှာ ပုဗ္ဗကြယ် နှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟူသ ...
" ဖားစည် သည် ကရင်တမျိုးသားလုံးအား ကိုယ်စားပြုသည့် တူရိယာ တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ စကောကရင်လို ကျိဢ် ဟုခေါ်ပြီး ပိုးကရင်က ကလူးကၠေါဟ် ဟု ခေါ်သည်။ ကရင်အမျိုးသားတို့သည် ဖားစည်ကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း သုံးထောင်လောက်က သုံးစွဲလာခဲ့ ကြသည်ဟု သုတေသီတို့က အခိုင်အ ...
ဗျာပါဆံ ဟူသည် ရှေးမိန်းမငယ်များ နားနောက်၌ ခပ်တိုတိုဖြတ်၍ချထားသော ဆံပင်ပုံစံကို ခေါ်သည်။ အင်းဝခေတ်တွင် ပေါ်လာသော်လည်း အမရပူရခေတ်တွင် ထင်ရှားသည်။ ပူပန်သောက ရှိသူတို့ ဆံမသိမ်းနိုင်သဖြင့် ထိုသို့ကျသည်ကို တင့်တယ်ဟန်ထင်ကာ အတုလိုက်ရာမှ အလေ့ဖြစ်ဟန်တူကြော ...
ဘဝေါဆိုသည်မှာ အလွန်ကြီးကျယ်သည့် ဒုက္ခကြုံမည့်အတွက် ကြိုတင်ကာ အင်မတန်ကြောက်ရွှံ့စေသည့် အခြင်းအရာများ ကြိုတင်ဖြစ်ပွားခြင်းမျိုးကိုဆိုလိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်- ဘုရားဆင်းတုတော် ရောင်ခြည်လွှတ်ခြင်း၊ စေတီပုထိုး ဆင်းတုတော်များအနီးတွင် ထွန်းလင်းနေခြင်း၊ ဆင်း ...
ဘုန်းကြီးကျောင်း သည် ဘုန်းကြီး၊ ရဟန်း၊ သံဃာများ သီတင်းသုံးရာ နေရာ အဆောက်အဦကို ခေါ်သည်။ တစ်ချို့ဘုန်းကြီးကျောင်းများသည် ကိုရင်များ၊ အနီးအနားမှ ကလေးသူငယ်များကို စာသင်ပေးလေ့ ရှိသည်။ ရှေးခေတ်ကာလကတည်းက ဘုရင်နှင့် မိဖုရား၊ မှူးကြီးမတ်ရာ၊ သူဌေးသူကြွယ်မျ ...
စာလုံးအစောင်း ==ဘုရားပွဲတော်များ== ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဗုဒ္ဓအယူဝါဒ၌ သက်ဝင်ယုံကြည်သော နိုင်ငံများအနက် မြန်မာနိုင်ငံသည် စေတီပုထိုးဘုရားကျောင်းကန် အများအပြားဆုံး ဖြစ်သည်။ မည်မျှပင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ကျေးရွာကလေးဖြစ် စေကာမူ၊ ထုံးဖြူဖြူ စေတီနှင့် ဘုရားတန်ဆောင ...
လူ့သဘာဝအရ လူသားဖြစ်သော ကျားနှင့် မ တို့ ချိန်ခါရွယ်ရောက်ပြီးနောက် အကြင်လင်မယားအဖြစ် အိုးအိမ်ထူထောင်နေထိုင်လေ့ရှိရာတွင် အမဖြစ်သော သတ္တဝါကို ရည်ညွှန်းသတ်မှတ်ခေါ်သော အမည်တမျိုးဖြစ်သည်။
မယိမ်တက် မအိမ်တက် ပွဲအခမ်းအနားသည် ရခိုင်တိုင်း သံတွဲမြို့နယ်တွင် ရှေးနှစ်ပေါင်း များစွာကပင် အစဉ်အလာ တည်ရှိခဲ့သော လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း ဆိုင်ရာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
အိမ်တွင်း မင်းမဟာဂီရိနတ်သည် အပြင် ၃၇ မင်း နတ်များတွင် ပါဝင်သည်။ အပြင် ၃၇ မင်းအစ အိမ်တွင်းက ဟု ဆိုလေ့ရှိကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နတ်ကိုးကွယ်သည့် ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့သည် ပန်းပဲမောင်တင့်တယ် နတ်ပေါ်ထွန်းချိန်က စတင်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့၏။ အိမ်တွင်းနတ် အုပ် ...
မိန်းမကောင်းအင်္ဂါ ရပ် ယင်းတို့ကား ၁ခြေလက္ခဏာ. ၁၃ ရပ် ၂ကိုယ်လက္ခဏာ. ၁၆ ရပ် ၃စိတ်လက္ခဏာ. ၆ ရပ် ၄လက်ဖဝါးလက္ခဏာ. ၉ ရပ် ၅လည်ပင်းလက္ခဏာ. ၁ ရပ် ၆အသံလက္ခဏာ. ၃ ရပ် ၇မျက်နှာလက္ခဏာ. ၈ ရပ် ၈သွားလက္ခဏာ. ၁ ရပ် ၉မျက်စေ့လက္ခဏာ. ၄ ရပ် ၁၀ဆံပင်လက္ခဏာ. ၃ ရပ် ကိုယ်လ ...
ယနေ့ခေတ်တွင် ဗိုလ်တစ်ထောင်စေတီတော်‎သမိုင်းနှင့် မြနန်းနွယ် ၏ သမိုင်းစဉ်သည်လည်း ယှဉ်လျက် ပါလာသည်ကို တွေ့ရသည်။ အချို့က မြနန်းနွယ်သည် သိုက်နန်းရှင်ဖြစ်သည် ဟု ဆို၏။ အချို့က မြနန်းနွယ် သည် သိုက်ချုပ် ဟုပင်ဆို၏။ သိုက်နှင့် ဆက်နွယ်သူများ သိုက်ကြိုးဖြတ် ...
လွန်ခဲ့ပြီးသော နှစ်ပေါင်း ၁ဝဝဝ ကျော်ခေတ်က ရှေးမြန်မာများ ရက်လုပ်သော အထည် အဝတ်များ၏ အကြောင်းကို ဂျီ၊ အီ၊ ဟာဗေး၏ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွင် အောက်ပါအတိုင်း ရေးသား ဖော်ပြထားပေသည်။ မြန်မာဘုရင်၏တိုင်းပြည်တွင် တွေ့ရှိရသော အထည်အဝတ်မျိုး ကို အခြားအရပ်ဒေသမျာ ...
မဟာသက္ကရာဇ် = ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဘိုးတော် ဒေဝဒဟပြည့်ရှင်ဘုရင် အဉ္စနမင်းကြီးသည် ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ရ ဒေဝီလရသေ့နှင့် တိုင်ပင်ပြီး မိမိလက်ထက်၌ ရောက်ဆဲဖြစ်သော သက္ကရာဇ် ခုကို ထိုနှစ် တပေါင်းလကွယ် စနေနေ့ အထိ ဖြိုပြီးလျှင် တန်ခူးလဆန်းရက် တနင်္ဂနွေနေ့က ...
သေနင်္ဂဗျူဟာ စစ်ပညာသည် တိုင်းပြည်အသီးသီး၊ လူမျိုးအသီးသီးတွင် ရှေးကတည်းက ရှိခဲ့သည်။ ယခုလည်းရှိနေဦးမည်။ နောင်လည်း ရှိရမည်ပင် ဖြစ်သည်။ စစ်ပညာများမှာ အချိန်ကာလ ခေတ်အားလျော်စွာ တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ထူးခြား တိုးတက် လာသော်လည်း အခြေအနေ အချိန်အခါအရ ရှေးပညာရပ်မျ ...
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်ဒေသတွင် ရိုးရာမင်္ဂလာပွဲ ဆင်ယင်ကျင်းပရာ၌ လက်ထပ်ထိမ်းမြားသည်ဆိုခြင်းထက် အိမ်တက် သည်ဟု ခေါ်ဝေါ်သည်။ မင်္ဂလာဆောင်သည်ဟုသော အသုံးအနှုံးမှာ ဒုတိယလိုက်သော မွေးစားစကားလုံးနှင့် တူသည်။ မင်္ဂလာပွဲကို အိမ်တက်ပွဲဟု ခေါ်ဝေါ်သည်။ အ ...
တောင်မကြီး ရှင်ညိုနတ် နှင့်မြောက်မင်း ရှင်ဖြူနတ် တို့မှာ မောင်တင့်တယ် နှင့် ရွှေနဘေ တို့၏ သားနှစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ သရေခေတ္တရာပြည် ဒွတ္တပေါင် မင်းကြီးထံတွင် ခစားနေရာတွင် မင်းကြီးက ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်၏ အစွမ်းသတ္တိကို သိသဖြင့် ထီးနန်းကို လုပ်ကြံမည်ကို စ ...
တကောင်းခေတ် နတ်အက ၊ မြင်စိုင်းခေတ် ကာအက ၊ ကုန်းဘောင်ခေတ် မြေဝိုင်းအက များမှ တစ်ဆင့်တက်၍ အစုအရုံးဖြင့် ကပြရသည့် အကတစ်မျိုး ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ထိုအကသည် ခေါင်း၊ ခါး၊ ခြေ၊ လက် စသည့် ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတို့ကို ဘယ်မှ ညာ၊ ညာမှဘယ်သို့ ညီညီညာညာ ယိမ်းကာ ...
ရခိုင်အရေးအသားများဖြစ်၍ မြန်မာလို စီလျော်အောင် ပြင်ပေးစေခြင်သည်။ ကျင်ဆိုသည်မှာ ကျင်ပင်ဖြစ်သည်ဟု၍ ဆိုရပေမည်။ ကျွမ်းကျင်သည်။ ကျင်လည်သည်။ ကျင်ပစ်ချသည်ဆိုသည့် အဓိပ္ပါယ်ပင်ဖြစ်သည်။
ရခိုင်အပျိုလူပျိုတို့ အရွယ်ရောက်လျှင် လူငယ်ချင်းချစ်ကြိုက်၍ လက်ထက်မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းများ ရှိသကဲ့သို့ အများအားဖြင့် မိဘများက အိမ်ထောင်ဘက်ကို ရွေးချယ်ပြီးသည်များသည်။ ရခိုင်လူမျိုးသည် မိဘစကားကိုနာခံတတ်သူများဖြစ်သဖြင့် မိဘများ၏အစီအမံကိုလက်ခံတတ်လေ့ရှိသ ...
ရတနာ့ဂူပွဲသည် တောင်ပြုန်းပွဲတော်ကြီး အပြီး နှစ်စဉ် ကျင်းပသော မန္တလေးဝန်းကျင်၏ အထင်ကရပွဲတော် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရတနာ့ဂူ မြတ်စွာဘုရားပွဲတော်နှင့် မယ်တော်နတ်ပွဲကို ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၈ ရက်စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့မှ ဝါခေါင်လကွယ်နေ့စက်တင်ဘာ လ ၈ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပလ ...